Mayelana NATHI - Pandawill Technology Co., Ltd
Amasekeli ePandawillithimba elinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 ekwakhiweni kwe-PCB nakwimboni yokukhiqiza ngogesi. Nge ingqikithi endaweni ukukhiqizwa 2,000 square metres kanye nabasebenzi abanamakhono kuka 500, siyakwazi ukukunikeza PCB womshini futhi inhlangano kusuka baphendukela okusheshayo, sibonelo ukukhiqizwa ivolumu.
Ikhwalithi yinto yethu yokuqala eza kuqala, kuyindlela eyisisekelo kuzo zonke izici zokuphatha idatha, impahla eluhlaza, ubunjiniyela, ukwenziwa kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe esikunikezayo. Sivunyelwe i-ISO9001, i-ISO 14001 ivunyelwe. Konke ukukhiqizwa kulandela izindinganiso ze-IPC futhi kufanisa nezidingo zakho zohlelo lokusebenza futhi zonke izinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe zikumazinga aphezulu enza kahle ngokuthengisa.
Ngaphandle kwekhwalithi, izindleko zihlala zingenye yokucatshangelwa okukhulu. Izinsizakalo zethu zizokuvumela ukuthi ube ngumdlali oncintisana kakhulu emakethe yakho, ngokugcina ikhwalithi yakho, nokukulethela onqenqemeni ngamanani entengo, ukufinyelela ezikhungweni zokukhiqiza ezinikezelwe nezikhethekile ezweni elincintisana nezindleko. Ukuqonda kwethu okungokwemvelo kokwakhiwa nokonakala kwezindleko lapho kwenziwa ibhodi lesifunda kusivumela ukuthi sibheke ngaphesheya komnotho olula wokonga isikali futhi imvamisa umphumela wokuqoqeka wezibuyekezo eziningana ungaba nomthelela omuhle ngokumangazayo ezindlekweni zonke. esingakwenza ukuze sinciphise imali oqhubeka ukuyisebenzisa.
Singabantu nezimo izicelo zakho. Ngaphandle kwento ejwayelekile, ubuchwepheshe, isikhathi sokuhola njll., Sihlala sizama ukufeza izinhlobo ezahlukahlukene zezidingo ezivela kumakhasimende ethu kusuka kumodeli ophendukelayo osheshayo ukubiza ukukhiqizwa kwevolumu okusebenzayo.
Ngenxa yabasebenzi bethu abazinikele abasebenza kanzima, manje sikhonza amakhasimende angaphezu kwe-1000 emhlabeni wonke. Imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo zisetshenziswa kakhulu embonini yezimboni, ezokwelapha, ezokuxhumana ngocingo, ikhaya elihlakaniphile, i-Intanethi yento nomkhakha wezimoto. Sibonga kakhulu ngaleli thuba nokwethenjwa okuvela kumakhasimende ethu. Ngokuphindaphindiwe, sihlala sizama ukuba isinyathelo phambili kumakhasimende ethu ngokufakazela imikhiqizo ethembekile ngentengo yokuncintisana nesikhathi esihle sokuhola. Silangazelela kakhulu ukusebenza nawe.